China TCTJ Desliming & Dhufududeynta Magnetic Separator Wershada iyo alaab-qeybiyeyaasha |Huate
Kala saarida TCTJ & Dhumucda Magnetic Separator
Codsiga: Kala-soocida birlabeedka qoyan waxaa loogu talagalay macdanaha birlabeedka ee luqluqashada iyo nadiifinta.Marka loo eego shuruudaha teknoolojiyadda, xoogga-saarista waa la raaci karaa, la dhumucdi karaa oo waa la tirtiri karaa si loo horumariyo darajadeeda.
Kala soocida iyo kala-saarida badeecada qulqulaya ee soocidda ka dib marka ugu horeysa ee la shiido.Dhumucda saxarka ka hor shiididda iyo shaandhaynta labaad.
Macdanta magnetic's jeexitaanka ka hor inta aan la quudin shaashadda wanaagsan oo dib u sabaynta;xoojinta ugu dambeysa ee magnetite.
Ka dib markii saxarka lagu quudiyo sanduuqa quudinta, waxaa lagu quudin karaa aagga kala soocida si toos ah. Macdanta magnetic waxaa lagu nuugaa dusha sare ee durbaanka magnetic ka dib magnetization waxaana loo wareejiyaa meesha laga soo dejiyo macdanta by durbaanka kala soocida wareega wareega biyaha hoostiisa. Riixitaanka , waxay baabi'in kartaa dabada , macdantana waxaa lagu sii daayaa sanduuqa biyaha lagu dhaqo ama xoqida , waxay noqotaa xoogga . cabbirka walxaha iyo cufnaanta sanduuqa hoose, waxay ka dhigi kartaa qaybaha culus iyo kuwa aan fiicneyn inay hoos u dhaadhacaan xagga hoose iyo ka soo baxa afka dabada, ka dibna tani waa dabo aan fiicneyn, dhoobada iftiinka waxaa laga soo saari karaa qalabka qulqulaya.
Hal-abuurnimada tignoolajiyada patent-ka 1
Kala-soocida magnetic-ka ee xoogga leh waxaa lagu qalabeeyaa flange quudinta Multipoint ee sanduuqa quudinta, naqshadeynta sare ee furan waxay gaari kartaa dhinaca iyo quudinta sare, waxaa jira qulqulka qulqulka ee sanduuqa quudinta, taas oo ka dhigaysa alaabta taangiga ku jirta inay labisantahay jihada dhererka durbaanka.
Hal-abuurka teknoolojiyadda patent-ka 2
Awoodda magnetic magnetic iyo qoto dheer ee dusha durbaanka waxaa lagu hagaajin karaa iyadoo la hagaajinayo qaab dhismeedka nidaamka magnetic sida waafaqsan sifooyinka walxaha iyo bartilmaameedyada kala soocida, taas oo ka dhigaysa alaabta magnetic ee dabada in ka yar 0.5% marka la barbardhigo kala-soocida magnetic caadiga ah.
Hal-abuurka teknoolojiyadda patent-ka 3
Nidaamka magnetic waxaa si qayb ahaan loogu talagalay iyadoo loo eegayo bartilmaameedka kala soocida, si kor loogu qaado xoogga magnetic ee aagga cabsida, aagga fiirsashada qaadashada qaab-dhismeedka tiirarka badan si loo yareeyo walxaha magnetic ee dabada, hagaajinta soo kabashada iyo xoogga saarista.
Hal-abuurka teknoolojiyadda patent-ka 4
xagal duubista nidaamka magnetic waa 160 ° ka weyn 127 ° ee nooca caadiga ah ee hoose, aagga kala soocida magnetic waa la dheereeyey iyo waqtiyada duubista qalabka magnetic waa la kordhiyey, heerka xoogga saarista waa la hagaajiyay.
Hore: Taxanaha YCW Ma Jirto Soo Kabashada Biyaha
Xiga: Kordhinta Kala-duwayaasha Magnetka
Taxanaha CTG-badbaadinta tamarta iyo ilaalinta deegaanka
AC-DC-AC Soo noqnoqoshada korantada
RCYA-3A Qaybiyaha Xadiidka Joogtada ah
Khadka Soo saarista Qalabka oo Dhameystiran ee Saxan Qallalan